WAR DEG AH: Saddex ruux oo lugu dhaawacay xaafadda Bergsjön ee Göteborg | Somaliska
War hadda naga soo gaaraya degmmadda Bergsjön gaar ahaan xaafadda Komettorget ee magaaladda Göteborg ayaa sheegaya in saddex ruux lugu dhaawacay halkaasi, ka dib markii la xabadeeyey.
Saddex ruux ayaa la dhaawacay kuwaas oo loola cararay isbitaalka” ayuu yiri Mattias Svensson oo ah sarkaal ka howlgala deegannadda galbeed oo u waramayey wargeyska GP. Labbo ruux ayaa boolisku sheegeen in ay xaaladoodu halis tahay, halka mid ka seddexaad uu soo gaaray dhaawac fudud. Booliska ayaa sidoo kale baaraya in falkaani yahay isku day dil oo la doonayey in lugu qaarajiyo iyo in kale. Dhinaca kale nin loo maleeynayo inuu ahaa dableey hubeeysan ayaa boolisku dhaawaceen sida uu qoray wargeyska Aftonbladet.
Goob jooge ayaa u sheegay wargeyska in uu maqlayey oo booliska oo ku wargelinaya in uu jiro qof dhabarka isna laga toogtay, halka mid kale oo isna Göteborgs Posten la hadlay sheegay inuu arkay qof lugta xabad looga dhiftay. Gaadiidka tareenadda iyo basaska ee xaafaddas ka howlgala ayaa la hakiyey sababo laxirrira xaalad amaan awgeed.
Xaafadda Bergsjön ayaa ah xaafad ay u badan yihiin soomaalida iyo ajaanibta waxaana mudooyinkaan dambe jiray falal amaan xummo oo halkaasi ka taagan. Wixii warbixin ah ee amuurtan la xirriira ayaan saacadaha soo socda idiin soo gudbin doonaa haddii Alla idmo.